Mametraka programa amin'ny fakan-tsary amin'ny rindran'asa amin'ny vatan-doko sy lesona ianarana | Vahaolana OMG
Fanatanterahana ny programa fakan-tsary amin'ny rindran'asa amin'ny vatan'olombelona sy lesona
We dia handinika lalina ao amin'ny fanatanterahana ny programa fakan-tsary, soso-kevitra sy lesona ianarana amin'ity lahatsoratra ity. Tao anatin'ny taona maro lasa izay, ny fivoaran'ny teknolojia ampiasain'ny sampana fampiharana ny lalàna dia mihazakazaka haingana be. Betsaka ny manampahefana eken'ny polisy no manapa-kevitra momba ny hahazoana teknolojia tsy nijanona rehefa nanomboka ny fikarakarana azy ireo - teknolojia toy ny rindrambaiko fankatoavana ny tarehy, vinavina mialoha, fampiharana GPS, rafitra fanaraha-maso basy, mpamaky takelaka fanamafisana, rafi-pifandraisana izay mitondra data ho an'ny manamboninahitra ' solosaina finday na kojakoja tanana, ary haino aman-jery sosialy mba hanao fanadihadiana momba ny heloka bevava ary hifanerasera amin'ny vahoaka.
Fa polisy maro be, ny fanamby lehibe indrindra dia tsy manapa-kevitra ny hampiakatra teknolojia tokana fa ny fitadiavana ny fifangaroana teknolojia ho an'ny fahefana omena mifototra amin'ny olan'ny heloka bevava, ny haavon'ny famatsiam-bola ary ny lafiny hafa. Ny fitadiavana ireo teknolojia tsara indrindra, na izany aza, dia tsy maintsy manomboka amin'ny fahazoana tsara ny teknolojia isan-karazany.
polisy Manamboninahitra mpanatanteraka izay nametraka opera fakan-tsary misy body dia misy fahamendrehana mifandray amin'ny fitaovana. Izy ireo dia mihevitra fa ny fakan-tsary mifono vatana manampy ny porofo; manofana manamboninahitra; mampiato sy mamaha ny fitarainana nateraky ny vahoaka; ary fanamafisana ny fangaraharana ataon'ny polisy, fandraisana andraikitra ary fampisehoana. Ho fanampin'izay, satria ny polisy ankehitriny dia miasa ao amin'ny tontolo iray izay ahafahan'ny olona manana fakantsary finday dia afaka mirakitra an-tsoratra ny fihaonan'ny polisy, ny fakantsary miendrika vatana manampy ny departemantan'ny polisy mba hahazoana antoka fa azo alaina ihany koa ny tranga voan'ny tompon'andraikitra?
Ny fifaneraserana eo anelanelan'ny manampahefana sy olom-pirenena iray ao amin'ny faritra iray dia efa voarakitra amin'ny fomba maro. Mety hosoratany amin'ny telefaona findainy ilay olom-pirenena. Raha misy ny tsy fitovian-kevitra mitranga, ny olona iray na maromaro no mety handray an-tsoratra ny zava-nitranga. Matetika misy fakantsary fiarovana azo antoka akaiky izay mirakitra ny fifandraisana. Ka ny zavatra mahatonga ny faharanitan-tsaina indrindra - raha maniry ny fandraisana andraikitra ianao na ho an'ny olonao sy ny manamboninahitra dia mifanena aminy dia ny hananana horonan-tsary avy amin'ny ilan'ny manamboninahitra.
The ny fampiasana fakantsary fiakanjoam-batana dia mametraka fanontaniana manan-danja momba ny fiainana manokana sy ny fahatokisan-tena. Inona avy ireo olana momba ny tsiambaratelo mifandraika amin'ny firaketana ireo niharan'ny heloka bevava? Ahoana no ahafahan'ny manampahefana manohana ny fifandraisan'ny vondrom-piarahamonina tsara raha nasaina mirakitra an-tsoratra momba ny karazana fifaneraserana amin'ny vahoaka izy? Moa ve ny mpikambana ao amin'ny vahoaka hahita izany fa tsy tokony holazaina amin'ny manampahefana iray fa nandrakitra izany fihaonana izany izy raha toa ka tsy ofisialy ny fihaonana? Moa ve ny fakantsary fitafiam-batana mitazona ny fifampitokisana eo amin'ireo manampahefana sy ny manam-pahefana ao anatin'ny departemantan'ny polisy?
Ary, mikasika ireo olana lehibe ireo, ny mpitarika ny polisy dia tsy maintsy manisy fiheverana politika marobe ihany koa, anisan'izany ny taham-bola marobe amin'ny fitrandrahana fakan-tsary sy ny fitehirizana ny angon-drakitra, ny adidy fanofanana ary ny rafitra izay tsy maintsy ekena mba hahazoana antoka fa tsy azo atao ny horonantsary fakan-tsary mifono vatana. miditra amin'ny antony tsy mendrika.
Fomba amin'ny fifandraisana eo amin'ny fiaraha-monina
By ny zavatra niainan'ny lehiben'ny polisy, ny mpikambana ary ny manam-pahaizana hafa, izay mandeha amin'ny fiantraikan'ny Kamera Body-Worn amin'ny fifandraisana eo amin'ny fiaraha-monina. Nanambara lesona maromaro izy ireo:
Ny fitrandrahana ny vondron'olona taloha alohan'ny fametrahana programa fandaharana fakantsary dia afaka manampy amin'ny fanohanana azo eo amin'ny programa sy hanamafisana ny maha-ara-dalàna ny programa eo amin'ny vondron'olona.
Hitan'ny masoivoho fa mahomby amin'ny fifandraisany amin'ny vahoaka, tompon'andraikitra eo an-toerana, ary ireo mpandray anjara hafa momba izay hampiasaina amin'ny fakantsary ny fomba hampiasaina ireo fakantsary.
Ny haino aman-jery sosialy dia fomba iray hanamorana ny firotsahan'ny vahoaka.
Ny fandanjalanjana ny politikam-pandraisana sy ny fomba fanaovan-kevitry ny masoivoho, na taloha sy aorian'ny fampiharana, dia afaka manampy manampy amin'ny fanekena ny besinimaro ary mitazona tompon'andraikitra ho tompon'andraikitra. Ny ohatra mangarahara dia misy ny famoahana ny politika ao amin'ny tranokalan'ny departemanta sy ny famoahana am-pahibemaso ireo trangan-javatra mampiady hevitra.
Ny fangatahana manampahefana dia mirakitra ny antso ho an'ny asa fanompoana sy ny asa mifandraika amin'ny lalàna - fa isaky ny fihaonan'ny besinimaro - dia afaka manome antoka fa tsy voatery noterena an-tsoratra ireo karazan-dresaka momba ny fifanakalozan-kevitra tsy ilaina amin'ny alàlan'ny vondron'olona ny manamboninahitra.
Amin'ny tranga tsy mahaliana ny olona hizara vaovao momba ny heloka bevava raha toa ka voarakitra, dia politika sarobidy ny hanomezana andraikitra ny manampahefana mba hamonoana ny fakantsariny na hitady ny fakantsary mba hanaovan-peo azy fotsiny. Tokony hieritreritra ny tompon'andraikitra na ny fahazoana ny fampahalalana dia manonitra ny mety ho fisehoan'ny vidin'ny fanambarana amin'ny sary mihetsika.
Ny firaketana ireo fotoana niseho tamin'ny asan-jiolahy mivantana dia afaka manampy ireo tompon'andraikitra amin'ny fahazoana fanambarana sy fihetseham-po tsy voaloa izay mety hanampy amin'ny famotorana na fitsarana any aoriana.
Mangataka ny manampahefana mba hametraka, na an-tsoratra na amin'ny fakantsary, ny antony mahatonga ny fakan-dry zareo ny fakantsary amin'ny fepetra takiana amin'ny firaketana azy ireo.
sampan-draharaha dia nanao dingana maromaro hiatrehana ny ahiahin'ireo manampahefana momba ny fakantsary miakanjoam-batana. Araka ny filazan'ny mpiasan'ny polisy maro, ny iray amin'ireo dingana fototra amin'ny mpitarika ny masoivoho dia ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fifandraisana mivantana amin'ireo manamboninahitra momba ny hevitry ny fakan-tsary mitazona vatana ho azy ireo.
Ohatra, ny tompon'andraikitry ny polisy Vacaville California dia nanadihady ireo manamboninahitra ary nahita fa anisan'izany ny manamboninahitra amin'ny fizotran'ny fampiharana — ary mamela azy ireo hanome fampidirana manan-danja — famelomana ho an'ny fakan-tsary. Mpanatanteraka polisy anisan'izany ny Chief Lanpher of Aberdeen sy Chief Chitwood ao Daytona Beach; dia nahita fa mahasoa ny fanatrehana ny fihaonambe manamboninahitra, antso an-tariby ary fivoriana amin'ireo solontena sendika mba hiresaka amin'ny fandaharam-pakan-tsary. Andriamatoa Michael Frazier avy ao amin'ny Surprise, Arizona dia naneho ny heviny fa ny mpiasany ary izy dia nanokana fotoana be dia be niresaka tamin'ny takelaka sy ny fivorian'ny departemanta miaraka amin'ny mpiasa rehetra izay mety ho tratran'ny fakantsary miakanjoana. Nanampy anay izany ho nahazo fanampiana tamin'ny fandaharana.
maro Ny lehiben'ny polisy dia naneho ny heviny fa ny famoronana ekipa fampiharana izay misy solontena avy amin'ireo vondrona isan-karazany ao anatin'ny departemanta dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny maha-ara-dalàna ny programa fakan-tsary mifono vatana. Ohatra, rehefa ny masoivoho manangana ny pôlitika sy fihetsiketsehana misy fakan-tsary dia afaka manampy ny fandraisana anjara avy amin'ireo komandin'ny patroli sy mpiambina, mpanara-maso ny fiofanana, ny mpanao fanadihadiana, ny sampana ara-dalàna, ny mpiasa anatiny, ny mpiasan'ny serasera, ny tompon'andraikitra fitantanana ny porofo, ary hafa manerana ny masoivoho izay hiditra amin'ny fakan-tsary mifono vatana. Ny lehiben'ny polisy ihany koa dia nilaza fa zava-dehibe amin'ny fanamafisana ny manampahefana fa ny fakantsary raikitra fitaovana dia fitaovana ilaina hanampiana azy ireo hanatanteraka ny andraikiny. Ny lehiben'ny Terry Gainer, serge sarimihetsika amerikana no mitazona fitaovam-piadiana, dia misafidy fa ny fakantsary vita amin'ny frayon amin'ny fakan-tsary ho toy ny fanamarinana momba ny fitondran'ny manamboninahitra no fomba diso. Ho sarotra ny hamporisika ireo manamboninahitra ho tonga matihanina ho matihanina ho tadiavin'izy ireo raha toa ka lazaintsika ny mitafy izany satria matahotra izahay fa ratsy ianareo, ary ny camera no hanampy anao hanaporofoana fa tsara ianao. Nilaza ihany koa izy fa ny fakantsary vatana iray dia tokony ho hita ho fitaovana hananganana porofo izay hanampy amin'ny filaminan'ny sasany.
Executive Ny pôlisin'ny polisy Lieutenant John Carli avy ao Vacaville, Kalifornia dia nanoro hevitra fa ny masoivoho manodidina ny fakan-tsary ho fitaovana fampianarana, fa tsy fepetra famaizana, amin'ny famporisihana ny mpanara-maso hijery ny fandraisam-peo video miaraka amin'ireo manamboninahitra ary manome valiny mahomby. Ny soso-kevitra iray mba hahavitana izany tanjona dia ny fanitarana ireo manamboninahitra izay mampiseho ireo fampisehoana vitany amin'ny alàlan'ny fampisehoana ireo rakitsary amin'ny fandaharam-piofanana na amin'ny fampisehoana ilay horonan-tsary mandritra ny lanonana loka.
Tombontsoa azo avy amin'ny fakan-tsary:
ankehitriny izahay dia hanolotra tombony azo amin'ny fakan-tsary azo avy amin'ny vatana avy amin'ireo zavatra niainan'ny lehiben'ny polisy. Misy ny fahatakaran'ny ankapobeny azy ireo fa ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia fitaovana ilaina. Ireto tombony ireto dia ireto manaraka ireto:
Fanamafisana ny fandraisana andraikitry ny polisy amin'ny alàlan'ny tranga tsy misy toa izany sy ny fihaonan'ny vahoaka sy ny manampahefana. Tokony hisy firaketana an-tsoratra momba ireo tranga tsy ampoizina toy izany eo amin'ny vahoaka sy ny manampahefana
Mampitsahatra ny fifanolanana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny maha matihanina ny tompon'andraikitra ary ny fitondran'ny olona voarakitra. Matetika ny vahoaka no manao fitarainana momba ny fitondran-tena bado ataon'ireo polisy. Ity dia azo ajanona amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny maha matihanina an'ireo tompon'andraikitra
Famahana ireo raharaha voarohirohy amina tompon'andraikitra sy fitarainana amin'ny alàlan'ny fanomezana firaketana an-tsoratra mivantana ireo tranga. Ary ity firaketana an-tsoratra ity dia tsy azo atao raha toa ka mampihatra ny programa fakan-tsary mifono vatana ao amin'ny Sampan-draharahan'ny fampiharana ny lalàna
Fanatsarana ny fangaraharahan'ny masoivoho amin'ny alàlan'ny famelana ny besinimaro mijery porofo amin'ny horonantsary mikasika ny hetsika sy ny fihaonan'ny polisy. Ny fahalalàna dia misy lanjany lehibe amin'ny fifandraisana tsara kokoa eo amin'ny departemantam-panjakana sy ny polisy
Famantarana sy fanitsiana ny olan'ny masoivoho anatiny amin'ny fampahafantarana ireo manamboninahitra manao raharaha ratsy sy ny olana manerana ny masoivoho
Fanamafisana ny fampisehoan'ny manampahefana amin'ny alàlan'ny fampiasana horonantsary fandraisam-peo ho an'ny fanofanana mpiambina sy ny fandinihana
Fanatsarana ny antontan-taratasy porofo ho an'ny famotorana sy ny fanenjehana
To fintina, manome soso-kevitra izahay fa ny lalàna amin'ny fampiharana ny lalàna dia tokony hamolavola pôlitika voasoratra an-taratasy mialoha kokoa amin'ny fampiharana ny programa fakan-tsary mifono vatana. Ny politika dia tokony ho feno amin'ny antsipirihany mba hanomezana torolàlana mazava sy azo ianteherana kanefa mamela malalaka ny fahatongavana rehefa mivoatra ny fandaharana. Rehefa mamolavola politika dia mahasoa ny mifanerasera amina mpanara-maso sy mpiasam-panjakana ambony, mpampanoa lalàna, sendika ny polisy, mpanolotsaina ara-dalàna ary fiaraha-monina. Ny masoivoho dia tokony hanao politika ahafahan'ny besinimaro malalaka.
Ny fakan-tsary miakanjoana dia mampiakatra hevitra maro izay tsy maintsy ataon'ireo masoivoho rehefa mahay ny politikany. Anisan'izany ny voka-dratsin'ny fakan-tsary amin'ny fiainana manokana sy ny fifandraisana amin'ny vondrom-piarahamonina, ny ahiahy napetraky ny manampahefana teo aloha, ny fanantenana fa hiteraka ny fakantsary ary ny taham-bola.
Fanatanterahana ny programa fakan-tsary amin'ny rindran'asa amin'ny vatan'olombelona sy lesona no farany niova: Oktobra 9th, 2019 by Admin
4746 Total Views 11 Views Today